Kulan aan caadi ahayn oo maanta ka dhacay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Kulan aan caadi ahayn oo maanta ka dhacay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya (SAWIRO)
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta markale xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, kulan aan caadi ahayn kula qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Seddaxdaasi mas’uul ayaa kulankooda uga hadlay xaaladda uu dalka maraayo iyo fursadaha ay haysato dowladda cusub ee Soomaaliya, wuxuuna Xasan Sheekh warbixin siiyay madaxweyne Farmaajo howlaha xafiiska madaxweynaha uu dalka usoo qabtay iyo dadaaladii lagu guuleystay mudadii 4-ta sanno ee u lasoo dhaafay.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Maxamed C/laahi Farmaajo ay haysato fursad ay dalka ku nabadeyn karto, kuna gaarsiin karto hiigsiga sanadka 2021-ka, si dimoqoraadiyad leh.
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahad-celiyey madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud mudadii uu dalka soo hoggaaminayay, guulihii la gaaray iyo horumarka dowladnimada Soomaaliya ku talaabsatay, waxaana uu sheegay in dowladdiisa cusub ay kusii darri doonto dadaal dheeri ah, islamarkaana ay ka shaqeyn doonto in Soomaali oo wadajirta ay guuleysato.
Sidoo kale, kulanka ayaa intii uu socday waxaa la isku soo hadal qaaday munaasabadda xil wareejinta ee lagu wado inay dhacdo maalinta barrito ah oo ay taariikhdu tahay 16-ka Feberaayo 2017-ka.
22-ka bishaan ayaa sidoo kale la filayaa in xafladda caleemo saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ay si rasmi ah uga dhacdo magaalada Muqdisho, waxaana haatan socoto qaban-qaabadda lagu diyaarinayo xafladaasi iyo munaasabada ay labada madaxweyne xilalka kula kala wareegayaan.